I-World Geospatial Forum 2019 eAmsterdam iqala ngenyathelo eliqinileyo- iGeofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Uqala ngesinyathelo esiqinileyo kwiForam ye-2019 Yehlabathi yeGeospatial e-Amsterdam
Nge-Epreli 2, 2019, eAmsterdam: Iqonga leGlobal Geospatial Forum (GWF) 2019, owona msitho ulindelweyo kuluntu lwe-geospatial, luqale izolo eTaets Art & Event Park eAmsterdam-ZNSTD. Umnyhadala uqale ngaphezulu kwe-1,000 labathunywa abasuka kumazwe angama-75 beza kunye bezokutshintshiselana ngolwazi malunga nokuba indawo ye-geospatial iya isaziwa njani kubomi bethu bemihla ngemihla kunye nendlela yokuqhuba izinto ezintsha kweli candelo. Usuku lokuqala lweforamu yeentsuku ezintathu (ngo-Epreli 2-4), eyindibano yonyaka yeengcali kunye neenkokheli ezimele yonke indalo yendalo, yaqala ngeseshoni yenxalenye ye- # GeospatialByDefault: Ukuxhobisa iibhiliyoni, umxholo we inkomfa yalo nyaka. Le nkomfa ibibonakalise nenxaxheba yababonisi abangama-45.
Ukuqalisa inkomfa, uDorine Burmanje, uMongameli waseKadaster, eNetherlands, u-co-host host of the conference, wagxininisa ukuba uluntu lwe-geospatial ludinga ukuhlukahluka okungaphezulu: abafundi, abaqalayo, abafazi, kunye namanyathelo avela kumazwe asakhulayo ukuze asebenzise amandla okwenene. yale teknoloji kwaye wenze "i-geospatial ngokungagqibekanga" intshukumo iphumelele. Uphinde wabongoza abasemagunyeni kunye nabasemagunyeni ukuba babonelele "ngedatha ethembekileyo" yophuhliso oluzinzileyo, kunye nokwenza ukuba ifumaneke kwabanye abasebenzisi abaphambili.
Ebalaselisa indlela itekhnoloji ye-geospatial edlala ngayo indima ebalulekileyo ekuhlangabezaneni neminye imiceli mngeni elijongene nayo ihlabathi, uMongameli we-Esri kunye noSihlalo weBhunga le-World Geospatial Industry Council uJack Dangermond uthe, "Sijonge kwihlabathi elitshintsha ngokukhawuleza. , ukudala iingxaki ezininzi kunye nezoyikiso ubomi bethu.” Kufuneka siguqule ukuqonda kwethu ihlabathi kunye nendlela esilufeza ngayo uxanduva lwethu, kwaye kobu buchwephesha be-geospatial bubonelela ngeyona qonga lilungileyo lokulinganisa ngokukhawuleza lo msebenzi kwaye lenze ilizwe lethu libe yindawo engcono yokuhlala. "
Unozakuzaku waseIndiya eNetherlands, uVenu Rajamony naye ubephakathi kwezithethi ezibalaseleyo kusuku lokuvula. Ukugxininisa umgaqo-nkqubo we-geospatial e-Indiya, wathi ishishini labucala linendima enkulu yokudlala apho. "I-Indiya ibona uphuhliso njengeyona njongo iphambili kunye nokwenza kube yinyani, kukho imfuneko yokutsiba ngokwethekhnoloji, kwaye indima ye-geospatial inendima ebaluleke kakhulu."
Iseshoni yesibini yeplaniyard, i-Moderation ye-Geospatial Media kunye noNxibelelwano, i-CEO ye-Sanjay Kumar, inomxholo othakazelisayo malunga nendlela ubuchwepheshe be-geospatial obudlala ngayo indima ephambili ekuchithweni kwecandelo lokwakha. Iphaneli yezivakalisi ezine eziphambili zixubushe ngokusetyenziswa kwemisebenzi kunye nemifanekiso yamashishini: ikamva yobunjineli bedijithali kwimakethe ye-AEC.
"Idatha yendawo idityaniswe ngokunzulu kwizisombululo zexesha langempela, imodeli-centric. Kukho ukuhamba komsebenzi phakathi kokufakwa kwedatha yokufaka imodeli yesenzo somzimba kunye nokuchaseneyo, utshilo uSteve Berglund, umongameli kunye ne-CEO yeTrimble. Eqhubeka nencoko, u-BVR uMohan Reddy, i-CEO ye-Cyient, e-Indiya, uthe: "Ubunjineli bedijithali buhlaziya endala kunye nokwakha entsha kwaye yinjini entsha yokukhula kwimarike ye-AEC, ukuguqula amashishini."
U-Andreas Gerster, i-Vice-President we-Global Construction BIM-CIM, uFARO, eJamani, wathi iiprojekthi zokwakha ziyanzima kakhulu kwaye zibiza, kwaye zilula, impendulo eyodwa kuphela ukuhlanganiswa kwetheknoloji.
Iseshoni yesithathu yocwangciso yosuku igxile kwi-5G + Geospatial - Shaping Digital Cities. U-Mohamed Mezghani, uNobhala Jikelele we-International Public Transport Association yaseBelgium wathetha malunga nendlela ii-arhente zezothutho emhlabeni jikelele ezithatha ngayo itekhnoloji ye-geospatial. UMalcolm Johnson, uSekela Nobhala Jikelele we-International Telecommunication Union (ITU), eSwitzerland, uthe: “I-ITU inendima ebalulekileyo ekufuneka iyidlale kuqoqosho lwedijithali; Abathathi-nxaxheba be-ITU bafuna ukusebenzisana namashishini ahlukeneyo. Xa kuziwa kwizixeko ezikrelekrele, kufuneka ndisebenze ngokubambisana ngakumbi ngokwetekhnoloji kunye nomgangatho. "
U-Wim Herijgers, uMlawuli weQela, i-Digital Innovation kunye neTekhnoloji yeFugro, wagxininisa: "I-Digital Foundation yinkqubo yedatha yedijithali, yendawo kunye neyomhlaba, ejolise ekuboneleleni abathengi ngokuqonda okunzulu kweendawo kunye ne-asethi. ", wachaza. ezongezelelweyo. UFrank Pauli, i-CEO ye-Cyclomedia, uchaze indlela ukuqonda kwe-geospatial ngundoqo ekucwangcisweni kwenethiwekhi ye-5G ngesantya esingazange sibonwe ngaphambili, ukucwangciswa koyilo kunye nolawulo lwe-asethi, kunye nokubonelela ngokuntywiliselwa, ukwahlula, kunye nelifu lenqaku lokwenza izigqibo ezifanelekileyo.
Iseshoni yokugqibela yosuku ijolise kuMandla okuba nesabelo: isiseko seziseko ze-Geospatial Ukwakha uqoqosho oluzinzileyo. Iiphaneli zixubusha ukuba ikhulu lama-21 lixesha leedolophu ezinkulu kwaye njengoko sisebenzisana kunye nokunceda ukwakha imizi kunye nezixeko ezizinzileyo, i-geospatial teknoloji inokukunceda ukuvula amathuba amakhulu enqubekela phambili. UDkt. Virginia Burkett we-USGS kunye no-Anna Wellenstien weBhanki yehlabathi, egxininise indlela ulwazi olubalulekileyo ngayo utshintsho lwezoqoqosho kunye neemfuno ze-geospatial zezidingo zezoqoqosho zelizwe. UWilliam Priest weKhomishoni yeGeospatial, uBukumkani baseUnited Kingdom, wagxininisa ngokubaluleka kwezoqoqosho ezongezelelekileyo kwilizwe lakhe. U-Paloma Merodio Gómez, i-Vice-President, INEGI, eMexico, ihlaziywe kwiimeko zoqoqosho, ubemi kunye noluntu kunye nenxaxheba ebalulekileyo edlalwa yi-geospatial technology.
Iprojekthi evulekileyo ye-ELS yaqaliswa nguMick Cory, uNobhala Jikelele kunye noMlawuli oyiNtloko we-EuroGeographics. I-EuroGeographics iqalise iinkonzo zokuqala zokuvula iinkcukacha zeprojekthi ye-Europe Open Services (ELS) kwi-Forum yeHlabathi yeGeati. Idatha yeprojekthi ye-ELS evulekileyo inika isinyathelo sokuqala ukufumana inzuzo yezoqoqosho nezentlalo yolwazi olugunyazisiweyo lwamalungu e-EuroGeographics, iCartography kaZwelonke, iCadastre kunye ne-Registry Authorities yaseYurophu.
Kule mihla ezimbini ezilandelayo, iindwendwe ezingaphezu kwama 1,000, ngaphezu CEO 200 kunye namagosa karhulumente aphezulu ukusuka ngaphezu 75 GWF amazwe liya kusebenzisa iqonga ukusebenzisana nokubambisana, uze ubonise umbono adibeneyo uluntu geospatial jikelele.
Ngokuphathelele kwiHlabathi yeHlabathi yeGeospatial Forum: I-Forum yeGeospatial Forum iyisicwangciso sokusebenzisana nesicwangciselwano esibonisa umboniso ohlangeneyo kunye wabelane ngawo jikelele welizwe jikelele. Yintlanganiso yonyaka yeengcali ze-geospatial kunye neenkokheli ezimele yonke i-geospatial ecosystem. Iquka imigaqo-karhulumente, i-arhente yelizwe, iinkampani zecandelo labucala, iinkampani ezininzi kunye nophuhliso, amaziko ezenzululwazi kunye nezifundo, ngaphezu kwazo zonke, abasebenzisi bokugqibela bekarhulumente, amashishini kunye neenkonzo kubemi.
Ikhosi ye-ArcGIS Pro-Siseko